Vhura dzidzo: kuchengetedza hupfumi uye zvakanakira vadzidzi | Linux Vakapindwa muropa
Vhura dzidzo dzidziso yekudzidzisa inovavarira kudzidzisa kubva kune zvakavhurika zviwanikwa, angave makosi akaita seMOOCs, software ine marezenisi akavhurika, mabhuku ezvinyorwa akaburitswa pasi pemarezinesi akavhurika senge Creative Commons, uye zvimwe zvakafanana zvinhu zvekudzidzisa zvinogona kusanganisira zvishandiso kana yakavhurika Hardware seRaspberry. Pi, Arduino, nezvimwe. Uzivi hwavanotangira iko kutenda kwekuti matekinoroji aya anokurudzira kudzidza kunochinja uye anobatsira kugovana mazano nemaitiro. Mumwe wemapiyona ekutanga mundima iyi aive Dr. Robin DeRosa ...
Muchokwadi, kune akakosha nzvimbo dzekudzidzisa dzinotevera iyi yakavhurika nzira yekudzidzisa, imwe yeanonyanya kuzivikanwa uye ane mukurumbira ndeye Open University yeUnited Kingdom. Inoonekwa seyunivhesiti yekutanga kutevera iyi modhi uye yakasikwa mu1969. Izvi zvakateverwa nemamwe masangano senge ane mukurumbira uye ane mbiri Massachusetts Institute of Technology kana MIT yeUnited States, uko Richard Stallman akabva… Kuitika? Nhasi kune mamwe akawanda nzvimbo uye nekusvika uye kuwedzerwa kwe MOOC uye mapuratifomu akaita seMoodle rave kutonyanya kufarirwa. Vashoma ndeavo vasina kutora chero eaya emahara epamhepo makosi pane chero chidzidzo. Kunyangwe mamwe mahurumende ehurumende ari kusimbisa aya makosi uye achiaisa mukufunga kwekupihwa mabasa uye kuvandudzwa kwebasa, kunyange zviri pachena kuti vachiri vasina huremu hwakaenzana nedhigirii rekuyunivhesiti kana zvimwe zvitupa zviri pamutemo zviri pachena.
Saka rakavhurika sosi kana yemahara uzivi inopfuura kupfuura software uye Hardware, uye zvishoma nezvishoma iri kutora dzimwe nzvimbo senge dzidzo, chikamu chakakosha kwazvo nekuda kwayo ramangwana redu rinoenderana. Saka kana matekinoroji emahara kana marezinesi akavhurika anogona kutibatsira kudzidzisa, gamuchira! Zvakanakira? Izvo zvakafanana izvo isu tese tinoziva nezve yakavhurwa sosi uye emahara marezinesi, senge rusununguko rwekugovana pamwe nekubatana, hupfumi kuchengetedza, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Vhura dzidzo: kuchengetedza hupfumi uye zvakanakira vadzidzi